Imtixaanada Apple AirPods Pro: horeyba way uga badnaayeen dhagaha dhegaha - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM Tijaabada Apple's AirPods Pro: in ka badan oo kaliya dhagaha dhegaha
Imtixaanada Apple AirPods Pro: horeyba way uga badnaayeen dhagaha dhegaha
Apple AirPods Pro ayaa laga yaabaa inay tahay sheyga ugu raaxada badan sanadka.
Qof kasta oo ku qaatay sannado badan indho indhaynta, falanqaynta, dhaleeceynta, faallooyinka iyo tijaabinta teknolojiyadda ayaa hal mar galaya qaab daal. Kacaanku waa naadir, badeecooyinka dhammaantood waa isku mid iyo mashaariicda aadka u xagjirka ah saameyn kuma leh dhagaystayaasheeda waxayna ugu dambeyntii ku dhici doonaan burburin. Xaqiiqdii, walxaha aad u dareento xiriir dhab ah inay yar yihiin - maxaa yeelay waxay ku qaadataa wax ka badan awooda farsamada si looga gudbo qaybta alaabta.
The AirPods Pro iyagu ma yihiin? Waxaan u maleynaynaa sidaas waana isku daynay inaan fahamno sababta, toban maalmood gudahood, ma yeeli karno shaygan la'aanteed.
Shirkadda 'Apple's AirPods Pro' Qiimaha 279 € oo cad ah (AmazonFnacApple)
Fahamka baahi: maqal maalin walba
Waxay noqon kartaa shay Apple ka soocya la tartamayaashooda iyo mid ka mid ah astaamaha lagu garto magaca ama loo diiday. Sheegashada badeecada weligeed kama sameysna kareemka iyo saadaasha laxiriirta astaamaha farsamada. Waa wax la arki karo oo ku saabsan Daawashada: Apple waxay dareentay in walxahaas yar-yar ay u baahan yihiin tamar si ay u helaan khibrad raaxo leh waxayna yiraahdeen si kasta, waxaan ka saari doonnaa saacadahayaga habeenkii - fursadda si dib loogu buuxiyo. Soo-saareyaasha ku dhawaaqa maalmaha is-u-shaqeysteyaasha maalmaha shaqada ma bixiyaan, maanta, waa dareere, firfircoon iyo waayo-aragnimo wax ku ool ah maalintii oo dhan.
Aaladda loo yaqaan 'AirPods' waa mid fikir ahaan ku saleysan isla falsafadda: haddii Apple ay joogsan laheyd qiimo cayriin ah, iyadoo la siinayo aalado u dhexeysa 'XCXXXXXX' iyo bateriga 4h wax macno ah ma sameyn karaan, marka mashiinka wireless-ku soo bandhigo daraasiin saacadood oo isticmaalka mitirka ah. Laakiin hadda, Cupertino wuxuu bartilmaameedsaday adeegsiga wuxuuna caado ka dhigtay in sanduuq yar uu nuugo AirPods markasta oo aad dhegaha ka saarto. Isticmaal? Isku xigxiga, ka bixitaan safar dheer oo diyaarad ama tareen ah (iyo xitaa, waxaan ku qaadnaa biririf xitaa xitaa gaadiidkaan), waa naadir in qofku isticmaalo koofiyad aad u dheer si isdaba joog ah.
Apple AirPods Pro sanduuqkooda // Isha: Louise Audry for Numerama
Waana horumar iyadoo loo marayo qaabkan qaabeynta shayga in aan ogaanno in waxkasta oo ku jira AirPods Pro, ay si sax ah u buuxinayaan baahida loo qabo miyiga. Iyaga oo adeegsanaya talooyinkooda jilicsan ee silicone ee aan ku dhejin dhamaadka adag iyo nidaamkooda kacsiga si dhegaha aysan u dhuuqin, AirPods Pro way dhammaadaan isla marka dhegta lagu dhigo. Foomka ay soo bandhigtay Apple, oo ah wax la yaab leh markii hore, ayaa si la yaab leh ugu habboon dhegaha badankood - markii ay AirPods u furantahay inay ka doodaan.
Waxaan ku jirnaa kaamil ahaanshaha badeecada macmiilka: caarada ayaa si fiican loo habeeyay oo si wanaagsan loogu dhex qasbay oo waxay qaadataa seddex cabbir kaliya si ay si buuxda ugu daboosho dhegaha badankood Isbarbardhiga Qalabka taleefanka gacmeed ee Sony ugu fiicanin kasta oo talooyinkooda 6 ah, waligood uma suuragelin inay dhegaheenna u galaan si habboon. Markay qabsadaan, waxay ku hanjabaan inay dhici doonaan iyo qaababka qaabdhismeedka ah waxay u yimaaddaan inay taabtaan ayagoon faraxsan qaybaha kale ee dhegta Marka la soo koobo, wax walbaa waa u fiican yihiin qof kasta oo dhego fiican leh, ma haystaan ​​aqoon-yahannimada guud ee AirPods Pro.
Tani waa sababta ugu horeysa ee telefishinnada Apple ay umuuqdaan kuwo aad uqurux badan: daqiiqado gudahood, oo aan bilaa muusig ah, waxay bixiyaan dareen raaxo leh oo la og yahay inay ugu dambeyso - sidii haddii loogu talagalay. oo aan loogu talagalay malaayiinta macaamiisha Cuantino weyn.
Si dhammaystiran ayaa loo geliyey // Source: Louise Audry for Numerama
Faahfaahinta isbedelka oo dhan sameeyo
Raaxo kadib, waxaa yimaada farsamada. Hadday makarafoonadu wireless hadda waa badeecado qaali ah (waxa ugu fiican ee aan hoos uga dhicin 250 €, haddii Pro Powerbeats ama Sony WF-1000XM3), sababta oo ah waxay u soo qaadaan qalab qalab dhammeystiran oo si fiican uga durugsan heerka codka. Apple waxay ku riixday dib-u-hagaajinta illaa dhamaadka. Annaga oo aan xitaa xusin processor-ka u go'ay, waxaan liis garayn karnaa waxyaabo yaryar oo sifiican loo fuliyay, kuwaas oo, dhamaadka u joojiya, abuuraya waayo-aragnimo aan la koobi karin.
Majirto caag adag oo caaga ah oo dhaawici kara dhegtaaga // Isha: Louise Audry for Numerama
Xulashada qaabka. Apple ma dhibayso heerka dhimista wuxuuna doorbidayaa fududeynta. Dhawaqa waa la xannibi karaa, la weyneyn karaa ama codka oo yareyn kara la joojin karaa. Markii la shaqeynayay, dhawaq yar baxay wuxuu u imanayaa inuu sameeyo kala-guurka u dhexeeya buuqa iyo boqortooyada aamusnaanta. Hallucination sahlan oo sahlan ayaa naga caawineysa inay na geliso xumbo oo aan ka baxno.
Yaraynta codka. Iyada oo la raacayo is-xakamaynta aan caadiga ahayn ee dhawaaqa ee lagu bixiyo dhegaha dhagta u xidhan, oo aan xanuun lahayn, dhegaha, AirPods Pro waxay bixiyaan yareynta dhawaaqa firfircoon gaar ahaan kuwa buluuga ah. Waxaan runtii dareemaynaa inay dunidu nagu sii dareyso. Aamusku weligiis ma dhammaystirna: marwalba waan maqalnaa waxyaabo, laakiin hab qunyar socod ah oo qunyar socod ah. Waa processor-ka 'AirPods Pro' kaas oo ku habeeya dhimista 200 ilbidhiqsi walba dheg walba. Intaa waxaa dheer, in la dhammaystiro waayo-aragnimada, Apple waxay bixisaa tijaabo maqal oo yar oo la sameeyo si loo ogaado haddii AirPods ay soo noqdeen. Marka Sony ay ku weydiisato inaad sawir ka qaadatid dhegtaada, Apple waxay si fudud u riixeysaa batoon ciyaar.
Sanduuq kasta oo yar // Source: Louise Audry for Numerama
Isagaoo. Apple waxay u baahan tahay, wax walba way fududahay. Waxaad ku furaysaa dacwada horteeda aaladda si loogula lamaaneeyo waana la qabtay: waad isticmaali kartaa AirPods Pro. Muuqaal kasta oo lammaanayaal oo ku weydiinaya inaad furato buuga gacanta si aad uhesho iskudhafka muhiimka ah ee aad riixdo dhowr ilbiriqsiyo badan waxay umuuqdaan inay kugu soo celinayaan qarniyadii dhexe ee teknolojiyada. Ka beddelka hal shey oo loo beddelayo mid kale ayaa waliba sahlan ... sida wadaagista isla maqalka maqalka laba labo-labo ah oo ah AirPods ama Beats: aad u wanaagsan oo loogu talagalay daawashada showga qof ka mid ah tareenka isla isla ama la wadaaga laba gabal oo muusig ah.
Sanduuqa. Mar alla markii aad hesho gogosha, AirPods Pro waxay ku dhacdaa xuquuqdooda waxayna ku dhacdaa booska uu dhigay Apple. Suurtagal ma aha in qalad la sameeyo. Intaa waxaa u dheer, runti way ka yar tahay kuwa tartanka.
Kontroolka awoodaha iyo aqoonsiga dhaqdhaqaaqa. Xakamaynta stem-ka waa fikrad fiican: si dhaqso ah ayaan gacanta ugu qaadnaa inaan ka dhaqaaqno hal xaalad oo mid kale u istaagno ama aan u joojinno hees. Way fiicantahay in aan ka saarno waxbadan waxkabadan AirPods Pro marka loo fiiriyo kuwa loo yaqaan 'AirPods' ': waxaan u tagnaa Transparency si aan si deg deg ah uga jawaabno saaxiib. Markaad runtii rabto inaad wax walba gooya si dhakhso leh, inaad madaxa ka saarto madaxa waa ku filan inaad wax walba joojiso.
Si ka duwan AirPods, oo dhaawici kara mustaqbalka fog, oo ugu dambeyntii fadhiisan kara badanaa, AirPods Pro si dhib leh dhegahayagu uma dhaqaaqin - caadiyanna ma nihin taageerayaasha qaabka intra, oo door bidaaya aalladaha madax-dhaqameedyada. Tani waxay calaamad u tahay isku xirnaanta dhakhsaha badan ee qofku sameeyo sheyga iyo calaamad sidoo kale muujineysa sida ugu wanaagsan ee fulinta dilku u yahay. FIT-ga madaxa dhegaha: waxaan u isticmaalnay si aan marar badan u isticmaalno bilaa muusig oo aan ahayn muusikada. Telefoonnada, oo ay ka caawisay yareynta dhawaaqa, ayaa tusaale ahaan ah qaylo-dhaan iyo weriyeyaasheena aad ayeynu u maqalnaa.
Miyaan ka qoomameyn doonaa wax khibraddan ah oo maalin kasta u beddelaya xiriirkeenna maqalka? Haa, AirPods waxay mudan yihiin liis ay iyagu iska leeyihiin. Maanta, si loo habeeyo, u gudub Settings, Bluetooth oo riix wareegga yar ee ku xiga aaladda. Waxay u egtahay is-dhexgalka shey cusub oo leh interface ah mid aad u taariikhaysan oo aan diyaar u ahayn soo dhaweyntiisa. Xitaa ha xusin jiritaanka Androidtaas oo si fudud u siisa ugu yar: miskaalada dhegaha ee dhegaha oo adeegso dejinta lagu habeeyay aaladda iOS.
Deegaanka oo la xakameeyo // Source: Louise Audry for Numerama
Had iyo jeer way adagtahay in ra'yi laga bixiyo shey maqal ah, inbadan oo ah aragtida muusikada ayaa ah shey la soojeediyey. Dhegaha dhegta fiiriya ma arki doonaan farqiga u dhexeeya miisaanka. Intaa waxaa dheer, waxaan ku laabanaa su’aashii asalka ahayd: ma runtii waxaan u baahan nahay dhageysi daacadnimo sare leh ee heesaha aan dhameystirneyn markii, si kastaba, aan u dhaqaaqno jawi buuq badan oo buuq leh?
Wadada, marinka dhulka hoostiisa, baska ama gadiidka muddada-dheer maahan meelo uu qofku ku heli karo profiter muusikada iyo koofiyadaha ugufiican wax badan kama qaban karaan geesbub asalka ah ama geeska ka dhex istaagaya heeso. Tani waa sababta, markii aan fahamnay isticmaalka badan ee badeecadan noocan ah, waxaan kaliya tixgelin karnaa inay yihiin kuwo ku habboon deegaankooda. Ma heli doontid raaxada qolka fadhiga, ama tuubadaada moobiilka ama kuwa ku hadla 5.1. Laakiin taasi waa waxa aan raadineyno? Gabi ahaanba ma aha iyo AirPods Pro aad ayey u awood badan yihiin soo saarida cod xoog leh waxayna la jaan qaadayaan dhageysigaaga.
Liiskeena bingee Imtixaanku wuxuu ahaa dhagaysi aad u qanacsan - aad ayaanu u keydinay dhamaan aaladaha kale ee dhagaysiga. Codkii wasakhda ahaa, ee isku buuqsanaa ee xilligii Neil Young Hey Hey My My wuxuu ku muujinayaa isbadal la'aantiisa oo dhan, oo leh gitaar culus iyo kalgacal qumman. Codku si fiican ayuu uga soo baxaa codadkaas. Farqiga weyn ee dhanka Kulan Ganacsi Xun of Weyes Dhiig ama codka wareegga ee Alma Forrer on Sannadka yeeyga si buuxda ayaa loo fuliyaa, AirPods Pro gabi ahaanba way xasilloon tahay dhawaqa elektarooniga ee shaqeynaya, oo u oggolaanaya in khadadka kaladuwan ay soo baxaan iyaga oo aan jahwareerin. U fiirsasho isku mid ah CIISE WAA Boqor ka yimid Kanye West ama Arvoles Waxaa qoray Avishai Cohen: AirPods waligood uma muuqdaan inay waxbadan ka qabtaan hal jeer, isku-darka adag ee labajibbaarada injiilka Yeezy.
Waxay noqon kartaa birta warshadaha waxoogaa ka badan in AirPods Pro ay noo muuqato wax yar oo raaxo leh - laakiin fikirka ayaa wali ah mid mawduuc leh. Rammstein-kii ugu dambeeyay kama sii weynaan karo, sida haddii cadaadiskiisa ku saabsan Apple Music uu khiyaameeyay dhagaha dhegaha ee eray walba. Waxaan mararka qaarkood ka fikirnaa sannadihii 2000 inaan dhagaysanno MP3 ee xun ee laga soo dajiyay Kazaa. Daawasho la mid ah, in kasta oo waxyar loogu dhawaaqayo, Slipknot-kii ugu dambeeyay, Ma nihin Noocaaga. Mar labaadna: waxaan ka hadlaynaa dhageysiga taxaddarka leh si aan go'aan u helno. Laga yaabee inaanan ku niyad jabineyn isticmaalka dhabta ah, gaadiidka iyo xafiiska.
Sida muuqata, shayga ugu yar ee Apple waa laga yaabaa, dhamaadka sanadka, waa sheyga ugu weyn.
Faahfaahin muujin: 5 / 5
The AirPods Pro waa mid ka mid ah walxaha tikniyoolajiyada ugu guulaha badan dhammaadka sanadka. Ka dib markii ay ku faafisay qaabka taleefanka gacanta ee wireless-ka ah ee loo yaqaan 'AirPods', Apple waxay ka faa'iideysataa sanadihii 3 ee waayo-aragnimada si ay u qaaddo tallaabo aad u weyn ka hor tartanka.
Iyada oo lagu xayeysiiyay shir la'aan, AirPods Pro si dhakhso ah ayey muhiim ugu noqdeen nolosheena caadiga ah: toban maalmood gudahood oo aan tijaabinno, waxaan dareemeynaa inaan haysano wax soo saar aan ku dhexjirnay dhaqankeenna oo aan uga jawaabno si kaamil ah baahiyaheenna taas oo ay annaga noo egtahay. ayaa la socday toban sano. Tanna, iyadoo leh ama aan lahayn muusig.
Ergonomics iyo naqshad kaamil ah
Sida ugu fiican sida muusikada la'aanteed
Yaraynta dhawaaqa smart
Bey'ada durugsan ee bay'ada Apple
Qaabeynta horumarsan way adag tahay in la helo
Habka daahfurnaanta, dadku maba oga inaad maqashid
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.numerama.com/tech/567920-test-des-airpods-pro-dapple-deja-bien-plus-que-des-ecouteurs.html#utm_medium=distibuted&utm_source=rss&utm_campaign=567920
YouTube wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka daad gureyso kanaal aadan aadan dooneynin inaad hada ku soo jeediso
Toddobaadkan, VPN Cyberghost wuxuu jebiyaa qiimaha dalabkiisa sanadlaha ah